अवैध एन्टिबायोटिक्स औषधिको आयात खुलाः मानव स्वास्थ्यमा खतरा
काठमाडौ,२८ माघ । नियमानुसार पशु आहारमा एन्टिबायोटिक्स औषधि मिसाउन पाइँदैन । यो नियमको रखबारी गर्ने प्रमुख दायित्व पशुसेवा विभागको हो । तर, विभागले नै नियमविपरीत एन्टिबायोटिक्स औषधि मिसाइएका पदार्थलाई पशु आहारको लेप लगाउँदै आयात गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ । पशु आहार आयात अनुमति दिन सक्ने ‘लुपहोल’मा टेकेर विभागकै वरिष्ठ अधिकारीको सहभागितामा अत्यधिक एन्टिबायोटिक्स मिसाइएका पदार्थलाई पशु आहार भन्दै आयात गर्न दिइएको हो ।
एन्टिबायोटिक्स मिसिएका पदार्थलाई पशु आहारको नाममा अनुमति दिने निर्णय विभागले औपचारिकरुपमा नै गरेको पाइएको छ । ०७३ साउन ११ गते बसेको विभागको पशु आहार तथा औषधि सिफारिस समितिको बैठकले नियमविपरीत एन्टिबायोटिक्सको आयात गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित यस्तो गलत निर्णय भएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
यसमा इमान्दार र निष्कलंक मानिएका पशुसेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीको समेत संलग्नता भेटिएको छ । प्रेमीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक डा। विमल कुमार निर्मलले सही धस्काएका छन् । निर्मल हाल विभागमा महानिर्देशककारुपमा कार्यरत छन् ।
अर्का उपमहानिर्देशक डा. किसन चन्द ठकुरी, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विजय चन्द्र झा, पशु सेवा तालिम तथा प्रचार निर्देशनालयकी कार्यकारी निर्देशक डा. दमयन्ति श्रेष्ठ र पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा.बलराम थापाले पनि नियमविपरीत गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विभागकै अन्य जिम्मेवारीमा रहेकाले पनि अनधिकृत निर्णयमा ‘हो मा हो’ मिलाउँदै सही धस्काएका छन् । अनधिकृत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य अधिकारीहरुमा वरिष्ठ पशु विकाश अधिकृत डा.लोकनाथ पौडेल, डा.नारायणप्रसाद शर्मा, जीवलाल लम्साल, खुसीलाल साह छन् ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरु डा.मोहनदेव लेखक, डा. मोदनाथ गौतम, डा.जगदीश पाण्डे पशु चिकित्सकहरु नन्दकुमार श्रेष्ठ, काजीबहादुर श्रेष्ठ, प्राविधिकहरु हरिसिहं भाट, मुक्तिराम पौडेल र लेखापाल देवी उप्रेतीसमेत सहभागी देखिएका छन् । सुरुमा तरल पशु आहारमा ६ प्रतिशतसम्म एन्टिबायोटिक्स औषधि मिसिएका पशु आहारलाई आयात सिफारिस गरिएकोमा पछि यही निर्णय टेकेर अत्यधिक एन्टिबायोटिक्स मिसिएका पदार्थलाई पनि पशु आहार भन्दै आयात सिफारिस गरिएको छ ।
यही कारण हानिकारक एन्टिबायोटिक्सको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर पशु सेवा विभागले आहारलाई अनुमति दिन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै त्यस्ता अवैध एन्टिबायोटिक्स औषधिको आयात खुला गरेको छ ।(साँघु साप्ताहिमा खबर छ)
२०७५ माघ २८ सोमबार ०७:४५:०० मा प्रकाशित